Madagasikara: Mandrahona ireo mpitoraka bilaogy sy mpikirakira twitter ny miaramila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2009 15:21 GMT
Manao fihetsiketsehana isan'andro ao an-drenivohitry Madagasikara ao ireo tsy mankasitraka ny HAT (Haute Autorité de la Transition) hatramin'ny 21 martsa 2009. Ilay diabe nokarakaraina tamin'ny asabotsy teo dia nosakanan'ny miaramila tamin'ny herisetra ka naharatrana farafahakeliny olona 34, ary nisy ankizy tamin'izany. Nandritra ny fihetsiketsehana dia nisy tovolahy nantsoin'ny mpikirakira internet hoe Razily nanantona tamim-pahasahiana ireto miaramila sady nanofahofa sainam-pirenena tamim-pireharehana. Nitifitra azy ny miaramila kanefa nandroso ihany izy na dia teo aza ny bala, sady vao mainka nanangana avo ny sainany, ary farany dia tonga teo akaikin'izy ireo ka nosamboriny, avy eo natsipiny tao anaty fiara rehefa avy nodarohany; rehefa izany dia natsipiny tamin'ny tany ny sainan'i Madagasikara. Hatramin'izao dia mbola tsy fantatry ny mpiserasera internet izay niafarany.
Ny fisamborana an-dRazily, sary radotiana.blaogy.com
Mitondra an'i Madagasikara ny HAT ankehitriny, taorian'ny fanapahan-kevitry ny filoha teo aloha Ravalomanana tsy hametra-pialana fa hamindra kosa ny fitondrana amin'ny miaramila. Ity farany no nanome ny fahefana tamin'ny HAT tao anaty fandrahonana (araka ny hita amin'ny sary mihetsika ao amin'ny YouTube ary araka ny zava-nisy niainan'ny masoivoho amerikana izay norahonana tamin'ny fitaovam-piadiana koa). Hatreo dia neken'ny HCC (Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana) izay miandraikitra ny fanajana ny lalàna sy ny lalàm-panorenana ao amin'ny firenena ny HAT.
Hatreto dia tsy misy firenena manaiky ny HAT sy ny filohany, Andry Rajoelina, na dia iray aza. Andry Rajoelina, filoham-pirenena afrikana tsy notendrena zandriny indrindra, izay na dia ny lalàm-panorenana Malagasy aza dia tsy manaiky azy satria mbola misy 6 taona izy vao afaka milatsaka ho fidiana filoham-pirenena! Ho an'ny filoha teo aloha kosa, Marc Ravalomanana, dia afaka nitsoaka ny lapam-panjakana izy ary lasa nialokaloka tany Afrika Atsimo avy eo nankany Swaziland.
Ny Fikambanana Fampandrosoana an'i Afrika tapany Atsimo sy ny Fikambanam-be Afrikana, izay ivondronan'ny firenena maro fantatra amin'ny fihirana ny demokrasia sy ny fanajana ny zon'olombelona, no nampiakam-peo ary nilaza fa tsy hilefitra mihitsy manoloana ny fanonganam-panjakana mihatra amin'ny anakiray amin'ny mpikambana ary tsy vitan'ny hoe nampiato an'i Madagasikara tsy ho mpikambana fotsiny fa mieritreritra koa ny hanasazy. Madagasikara moa dia nahato tsy ho mpikambana koa ao amin'ny Fikambanan'ny Firenena Mampiasa sy Miteny ny Teny Frantsay (Francophonie) ny alakamisy 02 aprily.
Firenena tandrefana maro, tahaka an'i Norvège sy Etazonia no nampiato ny fanampiana an'i Madagasikara ary mampanontany tena hoe ahoana no hahafahan'i Madagasikara miaina, Madagasikara izay firenena tena mahantra ary ny 80% ny fivelomany dia fanampiana avy any ivelany. Sarotra izany na dia nilaza aza ny HAT fa hamidy ny fiaramanidina vaovaon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay novidiany 45 tapitrisa Euros ary nomeny ny anarana hoe Air Force One/Two. Frantsa, izay nolazaina taty an-toerana fa nanohana ny fanonganana, dia nanitsy ny heviny ary nilaza fa Marc Ravalomanana ihany no filoha ara-dalàna araka ny lalàm-panorenana Malagasy.
Tsy mbola niainana ny krizy politika toy ity indray mandeha ity kanefa maneho endrika efa fahita ihany ka mahatonga ny mpitoraka bilaogy sy ny mpiserasera amin'ny twitter hanaraka akaiky ny fizotry ny tantara. Mitobaka amin'ny internet ny vaovao mahakasika ny krizy ary mahaliana izao tontolo izao. Ny mpiara-miasa aminay, Lova Rakotomalala, no voalazan'ny lahatsoratra iray tao amin'ny Wall Street Journal sy tao amin'ny fakana feon'ny CNN fa manana finiavana mandika ny teny ampiasain'ny mpiserasera amin'ny twitter ho amin'ny teny Anglisy. Mpitoraka bilaogy iray, Solofo Rafeno, no nahazo fanasana hanatrika ady hevitra tao amin'ny France 24.
Zavatra mampanahy no nihatra tamin'ny fampitam-baovao ho an'ireo mpikirakira twitter sy ireo mpitoraka bilaogy Malagasy vao tsy ela akory izay. Ny 30 martsa lasa teo, tao amin'ny sita Topmada.com no nahitana izao:
“20:00 – Nosamborin'ny polisy ny mpanao gazety sy mpaka sary sasany ary notereny hamafa ny sary nalainy”
Nohamarinin'ny mpampiasa twitter izany vaovao izany. Ny anankiray amin'ireny, Thierry_ratsiz no tratra ambodiomby naka sary ary niangaviana hamafa ny sary nalainy noho ny tahotra hiparitahan'izany ao amin'ny internet!!
R1lita syPakysse koa niaina izany zavatra izany:
TRT @r1lita: @pakysse, mpampiasa twitter hafa koa no noteren'ny polisy hamafa ny sary nalainy.
Fa ny zavatra tena nampatahotra indrindra tamin'ireny dia izay notantarain'i Avylavitra, mpitoraka bilaogy iray:
mydago.com no nanao resaka hanihany ny zava-niseho farany:
“Inona moa no azon'ny internet hatao manoloana ny fitaovam-piadiana? Manoloana ny baomba mandatsa-dranomaso? Manoloana ny miaramila mandeha fiara sy manao kiraro be? Ary ny basy? Tsy misy! Tena tsy misy! Noho izany, inona àry ny olana? Ambonin'izany dia nosy i Madagasikara. Avelao hilamina ny nosy. Tena nosy izy. Misy ranomasina manodidina azy. Ary ny tany farany akaiky azy dia mbola lavitra ihany. Afaka iafenana tsara. Ny herisetra, ny fanararaotana, sy ny sisa. Ny didy jadona koa. Sy ny mpanao didy jadona.
Fa androany kosa, tsy misy zavatra mandeha amin'ny tokony ho izy. Rehefa manao fanonganam-panjakana, dia tsy afaka manao ny asany ara-dalàna toy ny teo aloha ny mpitandro ny filaminana. Tsy voafehy anefa ny ankizy amin'izao fotoana izao. Tena mandreraka be!! Maka sary sy sary mihetsika izy ireo. Avy eo dia aparitany any amin'ny internet sy ny sita samy hafa ireny. Avy eo aseho ho hitan'izao tontolo izao. Tena mandreraka be mihitsy ny ankizy ankehitriny. Tsy misy lanjany intsony. Tsy hajainy intsony ny hery! Ny herin'ny miaramila!”
nolalaovina teto madagasikara ny baiboly. Nosafidina i Eva ho resahina; nolazaina izy fa azy ny hazo eo afovoan’ny saha ka tokony hihinanany na halainy, na dia efa nafaran’Andriamanitra aza hoe lozanareo raha mihinana io ianareo, mivavaha ry malagasy fa efa ho tonga ao amin’ny testamenta vaovao isika dia ny fahatongavan’ilay mpamonjy.
29 Desambra 2009, 13:40